ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်တွင် “မိုးဟေကို” သရုပ်ဆောင်မယ့် သူရဲကောင်းမလေး “မာရီလှတော” ရဲ့ အကြောင်း ~ Myanmar Online News
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်တွင် “မိုးဟေကို” သရုပ်ဆောင်မယ့် သူရဲကောင်းမလေး “မာရီလှတော” ရဲ့ အကြောင်း
11:19 PM အနုပညာ No comments
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် နဲ့ပတ်သက်ပြီး သရုပ်ဆောင်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ယနေ့ခေတ် လူငယ်တွေနဲ့ အနည်းငယ်စိမ်းနေတဲ့ မာရီလှတော ဆိုတဲ့ဇာတ်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီမာရီလှတောဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ နေရာမှာ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် မိုးဟေကိုကပါဝင် သရုပ်ဆောင်သွားမှာကိုလည်း အားလုံးအသိပါပဲ။ မာရီလှတောဆိုတာ ဘယ်လိုသူရဲကောင်းမျိုးလည်းဆိုတာကို ချပြချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ရဲ့အခြားသော လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီးတွေကို အများသိကြပြီး သမိုင်းကြောင်းလေ့လာသူတွေနဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ သာသိကြပြီး လူကြီးပိုင်းတွေသာ ရင်းနှီးတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အသက်ကို ကယ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ မာရီယိုရဲ့ အကြောင်းကို လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေ ထဲက ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
၁၉၄၀ _ ၄၁ လွတ်လပ်ရေးမရခင်မှာ ဒို့ ဗမာအစည်းရုံးဖွဲ့ပြီး သခင်တွေလွတ်လပ်ရေးရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ အချိန်။ လွတ်လပ်ရေးရဖို့တွက်တရားဟောတဲ့ သခင်နု နဲ့သခင်သန်းထွန်း ရန်ကုန်မှာအဖမ်းခံတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ သခင်အောင်ဆန်း နဲ့(ကျုံမငေး)သခင်တင်မောင် ကဟင်္သတမှာ တရားသွားဟောနေတယ်။ တရားနေတဲ့အချိန်မှာလည်း… သခင်အောင်ဆန်းကို ဆုငွေထုတ်ပြီးတရားပွဲက ဆင်းတာနဲ့ ဝင်ဖမ်းမှာဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဗြိတိသျှပုလိပ်တွေ တရားပွဲကိုလာဝိုင်းတယ်။ ဝိုင်းတာလဲသိရော… တရားပွဲထဲကနေ သခင်အောင်ဆန်းနဲ့(ကျုံမငေး)သခင်တင်မောင် က အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကနေထွက်ပြီး လမ်းမပေါ်ရောက်သွားတယ်။ လမ်းမပေါ်ရောက်ပြီးထွက်ပြေးမယ်လုပ်တော့ လမ်းမတိုင်း လမ်းမတိုင်းမှာ ဗြိတိသျှပုလိပ်တွေရှိနေတော့ဘယ်မှပြေးမလွတ်တောဘူး။ ပြေးမလွတ်တဲ့အချိန်ကျတော့မှ သခင်တင်မောင်က အကြံပေးတယ်။ “ကျွန်တော်တို့လူမျိုးခြားအဖမ်းတော့မခံဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဗမာအချင်းချင်းဖမ်းချင်ဖမ်းပါစေ” ဆိုပြီး ..အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဟင်္သတရဲ့ ရာဇဝတ်ဝန်ထောက်က မစ္စတာဇေးဗီးယား ဒုတိယရာဇဝတ်ဝန်ထောက်ကဦးလှတော(ဗမာလူမျိုး) ဦးလှတောကICSတကယ့်ဗြိတိသျှအစိုးရက လူယုံအနေနဲ့ခန့်ထားတဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးရာဇဝတ်ဝန်ထောက်။ ဦးလှတောရဲ့မိန်းကလေးက… ဇနီးသည်လေးက…… ” အင်မတန်ချော… အင်မတန်လှ… အင်မတန် အသက်ငယ်ပြီးတော့ ဗမာတွေမျက်စေ့ထဲမှာကြည့်မရထောင့်မကျိုး… ဗိုလ်ဆန်တဲ့ကလေးမလေး” နာမည်ကိုက ယောက်ျားရပြီးတာနဲ့“မာရီလှတော” ဆိုပြီးတော့ ..နာမည်ပြောင်းထားတဲ့ ကလေးမလေး။ အဲ့ဒီအိမ်က သခင် အောင်ဆန်း နဲ့(ကျုံမငေး)သခင် တင်မောင် ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ နီးတယ်။နီးတော့အဲဒီ ခြံဝန်းထဲကို ဝင်သွားတယ်။ ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတိုက်ရဲ့ဆင်ဝင်အာက်မှာ ကားတစ်စီး ရပ်ထားတယ်။ ကားဘေးမှာ လင်မယားနှစ်ယောက် စကားပြောနေတယ်။ ယောက်ျားကရုံးသွားကာနီးအချိန်မှာ သခင်နှစ်ယောက်ကရောက်သွားပြီးသခင်တင်မောင်ကစကားစလိုက်တယ် ” ကျွန်တော်တို့ လာတာကတော့…………” ပြောစရှိသေး”မာရီလှတော” က သူ့ ယောက်ျားကို……”အစ်ကို အလုပ်ကို သွားစရာရှိတာသွားတော့…… ကျွန်မကြည့်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့…… သူ့ ယောက်ျား ကို ကားပေါ် တင်ပေးလိုက်တယ်။ သူ့ယောက်ျားကားမောင်းထွက်သွာပြီးတော့မှ “ရှင်တို့ ဘာကိစ္စရှိလဲ”လို့ မေးတော့မှ သခင်တင်မောင်က ပြောပြသည်။ “ခင်ဗျားယောက်ျားဆီမှာ အဖမ်းခံဖို့ လာတာ… ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုမှပြေး မလွတ်တော့ဘူး… အဲ့ဒီဗြိတိသျှပုလိပ်တွေ လက်ထဲမှာ အဖမ်း မခံချင်လို့ ဗမာအချင်းချင်း အဖမ်းခံချင်လို့ … ခင်ဗျားယောက်ျားဖမ်းမလား ဆိုပြီးလာအပ်တာ…… ခုခင်ဗျားယောက်ျားထွက် သွားပြီ… ခင်ဗျားတယ်လီဖုန်းဆကနီးစပ်ရာ ဂတ်ကို ဒါမှမဟုတ် ခင်ဗျားယောက်ျားကို ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြား… ကျွန်တော်တို့အဖမ်းခံဖို့ အဆင်သင့်ပဲ” လို့ ပြောချိန်မှာ ..”မာရီလှတော” က ခဏလေးနေဦး…… ဆိုပြီးတော့ အိမ်ထဲဝင်သွားတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သခင်နှစ်ယောက်က သူတို့ ကို ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားမယ်လို့ ထင်နေတဲ့အချိန်မှာ ခဏလေးကြာတော့… မာရီလှတောပြန် ထွက်လာတယ်။ လက်ထဲမှာကားသော့လေးတစ်ချောင်းပါလာတယ်။ ပြီးတော့မှဂိုထောင်ထဲကကားတစ်စီးထုတ်လာကာ… “ရှင်တို့ နှစ်ယောက် နောက်ခန်းကတက်။ဝပ်ပြီးလိုက်ခဲ့… ” ဆိုပြီး မာရီလှတောက အဲဒီ သခင်နှစ်ယောက်ကို ခြံဝန်းထဲက ထွက်ပြီးတော့ ဟင်္သတမြို့ထဲကို ဖြတ်မောင်းတယ် ..ဖြတ်မောင်းတဲ့အချိန်မှာ စစ်ပုလိပ်တွေက ဒါ… ရာဇဝတ်ဝန်ထောက်ရဲ့ကားဆိုတာသိတော့ မရှာပါဘူး။ မရှာတော့ဘယ်ကို ရောက်သွားလဲဆိုတော့ ဟင်္သတနဲ့ တော်တော်လေးလှမ်းတဲ့ ယုန်တလင်း” ဆိုတဲ့ရွာကိုရောက်သွားတယ်။ ယုန်တလင်း”ဆိုတဲ့ရွာမှာ ဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့ နောင်တစ်ချိန်မှာ”အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်” ဖြစ်လာမဲ့ “မန်းဘခိုင်” ရှိတယ်။ မန်းဘခိုင်ရဲ့ငှက်ပျောတောကြီးထဲမှာ သခင်နှစ်ယောက်ကို ဖွက်ပေးထားတယ်။
ဖွက်ပေးထားထားပြီး နောက်တစ်နေ့ မှာ မန်းဘခိုင်က သူ့ ငှက်ပျောလှေတွေထဲမှာ ငှက်ပျောခိုင်တွေနဲ့ဖိဖိပြီးတော့မှသခင်နှစ်ယောက်ကိုရန်ကုန်သို့ ပို့ လိုက်တယ်။ နောက်တစ်နေ့ မှာ သခင်အောင်ဆန်းဟာ “အမွိုင်”ကို လွတ်လပ်ရေးအတွက် ခရီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီဘာပြောချင်လဲဆိုတော့……”မာရီလှတော”ကို လူတွေသိသလား။အဲဒီ မာရီလှတော ရဲ့လုပ်ရပ်က ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲ မာရီလှတောကသာ အဖမ်းခိုင်းလိုက်ရင် ဘာပြောပြော ကျွန်တော်တို့ လွတ်လပ်ရေး ဒီလောက်မြန်မြန်ရပါ့မလား ?စဉ်းစားစရာတွေများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီတော့မာရီလှတောဟာကောင်းကင်မရှိတဲ့ကြယ်မဟုတ်ဘူးလား?(ဗိုလ်ချုပ်တို့ က ကောင်းကင်ရှိတဲ့ကြယ် ) ဘာလို့ ကျွန်တော်တို့ မတွေ့ ကြရတာလဲ? အဲဒီလိုကောင်းကင်မရှိတဲ့ ကြယ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ မှားမှန်ခွဲနိုင်တဲ့ပညာဆိုတာကိုဘာတွေလဲဆိုတော့… မာရီလှတောကသူဘာလုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့ အချိန်မှာ မှန်လား မှာလားဆိုတာ နှစ်ချက်ကိုစဉ်းစားမယ်………ဖမ်းလိုက်တာမှန်လား …လွှတ်လိုက်တာမှန်လား ဆိုတာကိုပေါ့။
“ဘယ်လောက်ခေတ်ဆန်ဆန် ဘယ်လောက် ဗိုလ်ဆန်ဆန်နှလုံးသားက ဗမာ ဗျ…… ဗမာလိုတွေးမှာပဲ ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေးကိုကြိုက်မှာပဲ။ ယောက်ျားက ဘယ်လောက်ပဲ ဗြိတိသျှဝန်ထမ်းဖြစ်ဖြစ် ဗမာပြည်ကိုချစ်မှာပဲ ။ အဲဒီအတွက်လွှတ်လိုက်တာ မှန်တယ်လို့သူသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ဝင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ လွှတ်တာမှန်မှန်းသိရင်လွှတ်ရဲမလား…လွှတ်လိုက်ရင် ငါ့ယောက်ျားပြုတ်သွားမလား……ငါတို့ တိုက်ကြီးကို လာပိတ်သွားမလား… ငါ့တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းမလား… သူတွေးမှာပဲ။ သူမတွေးပဲမနေဘူး……အဲဒါတွေ တွေးပြီးတော့မှ… အဲဒါတွေဖြစ်ချင်ဖြစ် လုပ်ရဲတယ်ဆိုပြီး မာရီလှတော လုပ်သွားတာ……အဲ့ဒါအမှန်ကိုချစ်တာပဲ။ အဲဒါသူရဲကောင်းပဲ။ ကျွန်တော်တို့ကမာရီလှတောလိုမလုပ်ရဲလို့မလုပ်ခဲ့ရတာတွေ အများကြီး။ ဒါဆိုရင်မာရီလှတောဟာလည်းသူရဲကောင်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါလို့ဆိုချင်ပါတယ်။ ဒီလို သူရဲကောင်းမျိုးကို မသိကြသေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းစာအုပ်များမှ ပြန်လည်ကိုးကားတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
မသိသေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်း ပြန်လည်မျှဝေပေးကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်....။
#Myanmar_Online_News #ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း #Moe_Hay_Ko #မာရီလှတော
ဗိုလျခြုပျရုပျရှငျတှငျ “မိုးဟကေို” သရုပျဆောငျမယျ့ သူရဲကောငျးမလေး “မာရီလှတော” ရဲ့ အကွောငျး
ဗိုလျခြုပျရုပျရှငျ နဲ့ပတျသကျပွီး သရုပျဆောငျတှကေိုရှေးခယျြပွီးတဲ့နောကျမှာ ယနခေ့တျေ လူငယျတှနေဲ့ အနညျးငယျစိမျးနတေဲ့ မာရီလှတော ဆိုတဲ့ဇာတျရုပျနဲ့ပတျသကျပွီး ပွောပွခငျြပါတယျ။ ဒီမာရီလှတောဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးရဲ့ နရောမှာ ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယိုသရုပျဆောငျ မိုးဟကေိုကပါဝငျ သရုပျဆောငျသှားမှာကိုလညျး အားလုံးအသိပါပဲ။ မာရီလှတောဆိုတာ ဘယျလိုသူရဲကောငျးမြိုးလညျးဆိုတာကို ခပြွခငျြတာပဲဖွဈပါတယျ။
အောငျဆနျးရုပျရှငျရဲ့အခွားသော လှတျလပျရေး ဖခငျကွီးတှကေို အမြားသိကွပွီး သမိုငျးကွောငျးလလေ့ာသူတှနေဲ့ လှတျလပျရေးကို စိတျဝငျစားသူတှေ သာသိကွပွီး လူကွီးပိုငျးတှသော ရငျးနှီးတဲ့ ဗိုလျခြုပျရဲ့ အသကျကို ကယျပေးခဲ့ဖူးတဲ့ မာရီယိုရဲ့ အကွောငျးကို လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှေ ထဲက ကောကျနှုတျဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။
၁၉၄၀ _ ၄၁ လှတျလပျရေးမရခငျမှာ ဒို့ဗမာအစညျးရုံးဖှဲ့ပွီး သခငျတှလှေတျလပျရေးရဖို့ကွိုးစားနတေဲ့ အခြိနျ။ လှတျလပျရေးရဖို့တှကျတရားဟောတဲ့ သခငျနု နဲ့ သခငျသနျးထှနျး ရနျကုနျမှာအဖမျးခံတယျ။ တဈခြိနျတညျးမှာ သခငျအောငျဆနျး နဲ့(ကြုံမငေး)သခငျတငျမောငျ ကဟင်ျသတမှာ တရားသှားဟောနတေယျ။ တရားနတေဲ့အခြိနျမှာလညျး… သခငျအောငျဆနျးကို ဆုငှထေုတျပွီးတရားပှဲက ဆငျးတာနဲ့ ဝငျဖမျးမှာဖွဈတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ဗွိတိသြှပုလိပျတှေ တရားပှဲကိုလာဝိုငျးတယျ။ ဝိုငျးတာလဲသိရော… တရားပှဲထဲကနေ သခငျအောငျဆနျးနဲ့ (ကြုံမငေး)သခငျတငျမောငျ က အဲ့ဒီလူအုပျထဲကနထှေကျပွီး လမျးမပျေါရောကျသှားတယျ။ လမျးမပျေါရောကျပွီးထှကျပွေးမယျလုပျတော့ လမျးမတိုငျး လမျးမတိုငျးမှာ ဗွိတိသြှပုလိပျတှရှေိနတေော့ဘယျမှပွေးမလှတျတောဘူး။ ပွေးမလှတျတဲ့အခြိနျကတြော့မှ သခငျတငျမောငျက အကွံပေးတယျ။ “ကြှနျတျောတို့လူမြိုးခွားအဖမျးတော့မခံဘူး။ ကြှနျတျောတို့ဗမာအခငျြးခငျြးဖမျးခငျြဖမျးပါစေ” ဆိုပွီး ..အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ဟင်ျသတရဲ့ ရာဇဝတျဝနျထောကျက မစ်စတာဇေးဗီးယား ဒုတိယရာဇဝတျဝနျထောကျကဦးလှတော(ဗမာလူမြိုး) ဦးလှတောကICSတကယျ့ဗွိတိသြှအစိုးရက လူယုံအနနေဲ့ခနျ့ထားတဲ့ ဒုတိယအကွီးဆုံးရာဇဝတျဝနျထောကျ။ ဦးလှတောရဲ့မိနျးကလေးက… ဇနီးသညျလေးက…… ” အငျမတနျခြော… အငျမတနျလှ… အငျမတနျ အသကျငယျပွီးတော့ ဗမာတှမေကျြစထေဲ့မှာကွညျ့မရထောငျ့မကြိုး… ဗိုလျဆနျတဲ့ကလေးမလေး” နာမညျကိုက ယောကျြားရပွီးတာနဲ့ “မာရီလှတော” ဆိုပွီးတော့ ..နာမညျပွောငျးထားတဲ့ ကလေးမလေး။ အဲ့ဒီအိမျက သခငျ အောငျဆနျး နဲ့ (ကြုံမငေး)သခငျ တငျမောငျ ရောကျနတေဲ့နရောနဲ့နီးတယျ။နီးတော့အဲဒီ ခွံဝနျးထဲကို ဝငျသှားတယျ။ ဝငျသှားတဲ့အခြိနျမှာတိုကျရဲ့ဆငျဝငျအာကျမှာ ကားတဈစီး ရပျထားတယျ။ ကားဘေးမှာ လငျမယားနှဈယောကျ စကားပွောနတေယျ။ ယောကျြားကရုံးသှားကာနီးအခြိနျမှာ သခငျနှဈယောကျကရောကျသှားပွီးသခငျတငျမောငျကစကားစလိုကျတယျ ” ကြှနျတျောတို့လာတာကတော့…………” ပွောစရှိသေး”မာရီလှတော” က သူ့ယောကျြားကို……”အဈကို အလုပျကို သှားစရာရှိတာသှားတော့…… ကြှနျမကွညျ့ရှငျးလိုကျမယျဆိုပွီးတော့…… သူ့ယောကျြား ကို ကားပျေါ တငျပေးလိုကျတယျ။ သူ့ယောကျြားကားမောငျးထှကျသှာပွီးတော့မှ “ရှငျတို့ဘာကိစ်စရှိလဲ”လို့မေးတော့မှ သခငျတငျမောငျက ပွောပွသညျ။ “ခငျဗြားယောကျြားဆီမှာ အဖမျးခံဖို့လာတာ… ကြှနျတျောတို့ဘယျလိုမှပွေး မလှတျတော့ဘူး… အဲ့ဒီဗွိတိသြှပုလိပျတှေ လကျထဲမှာ အဖမျး မခံခငျြလို့ ဗမာအခငျြးခငျြး အဖမျးခံခငျြလို့… ခငျဗြားယောကျြားဖမျးမလား ဆိုပွီးလာအပျတာ…… ခုခငျဗြားယောကျြားထှကျ သှားပွီ… ခငျဗြားတယျလီဖုနျးဆကနီးစပျရာ ဂတျကို ဒါမှမဟုတျ ခငျဗြားယောကျြားကို ဖုနျးဆကျပွီးတော့အကွောငျးကွား… ကြှနျတျောတို့ အဖမျးခံဖို့အဆငျသငျ့ပဲ” လို့ပွောခြိနျမှာ ..”မာရီလှတော” က ခဏလေးနဦေး…… ဆိုပွီးတော့ အိမျထဲဝငျသှားတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ သခငျနှဈယောကျက သူတို့ကို ဖုနျးဆကျ အကွောငျးကွားမယျလို့ထငျနတေဲ့အခြိနျမှာ ခဏလေးကွာတော့… မာရီလှတောပွနျ ထှကျလာတယျ။ လကျထဲမှာကားသော့လေးတဈခြောငျးပါလာတယျ။ ပွီးတော့မှဂိုထောငျထဲကကားတဈစီးထုတျလာကာ… “ရှငျတို့နှဈယောကျ နောကျခနျးကတကျ။ဝပျပွီးလိုကျခဲ့… ” ဆိုပွီး မာရီလှတောက အဲဒီ သခငျနှဈယောကျကို ခွံဝနျးထဲက ထှကျပွီးတော့ ဟင်ျသတမွို့ထဲကို ဖွတျမောငျးတယျ ..ဖွတျမောငျးတဲ့အခြိနျမှာ စဈပုလိပျတှကေ ဒါ… ရာဇဝတျဝနျထောကျရဲ့ကားဆိုတာသိတော့ မရှာပါဘူး။ မရှာတော့ဘယျကို ရောကျသှားလဲဆိုတော့ ဟင်ျသတနဲ့တျောတျောလေးလှမျးတဲ့ ယုနျတလငျး” ဆိုတဲ့ရှာကိုရောကျသှားတယျ။ ယုနျတလငျး”ဆိုတဲ့ရှာမှာ ဘယျသူရှိလဲဆိုတော့ နောငျတဈခြိနျမှာ”အာဇာနညျခေါငျးဆောငျ” ဖွဈလာမဲ့ “မနျးဘခိုငျ” ရှိတယျ။ မနျးဘခိုငျရဲ့ငှကျပြောတောကွီးထဲမှာ သခငျနှဈယောကျကို ဖှကျပေးထားတယျ။
ဖှကျပေးထားထားပွီး နောကျတဈနမှေ့ာ မနျးဘခိုငျက သူ့ငှကျပြောလှတှေထေဲမှာ ငှကျပြောခိုငျတှနေဲ့ဖိဖိပွီးတော့မှသခငျနှဈယောကျကိုရနျကုနျသို့ပို့လိုကျတယျ။ နောကျတဈနမှေ့ာ သခငျအောငျဆနျးဟာ “အမှိုငျ”ကို လှတျလပျရေးအတှကျ ခရီးထှကျသှားခဲ့တယျ။ ကောငျးပွီဘာပွောခငျြလဲဆိုတော့……”မာရီလှတော”ကို လူတှသေိသလား။အဲဒီ မာရီလှတော ရဲ့လုပျရပျက ဘယျလောကျအရေးကွီးလဲ မာရီလှတောကသာ အဖမျးခိုငျးလိုကျရငျ ဘာပွောပွော ကြှနျတျောတို့လှတျလပျရေး ဒီလောကျမွနျမွနျရပါ့မလား ?စဉျးစားစရာတှမြေားကွီးရှိပါတယျ။အဲဒီတော့မာရီလှတောဟာကောငျးကငျမရှိတဲ့ကွယျမဟုတျဘူးလား?(ဗိုလျခြုပျတို့က ကောငျးကငျရှိတဲ့ကွယျ ) ဘာလို့ကြှနျတျောတို့မတှကွေ့ရတာလဲ? အဲဒီလိုကောငျးကငျမရှိတဲ့ ကွယျတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ အဲဒီမှာ မှားမှနျခှဲနိုငျတဲ့ပညာဆိုတာကိုဘာတှလေဲဆိုတော့… မာရီလှတောကသူဘာလုပျရမလဲလို့စဉျးစားတဲ့ အခြိနျမှာ မှနျလား မှာလားဆိုတာ နှဈခကျြကိုစဉျးစားမယျ………ဖမျးလိုကျတာမှနျလား …လှတျလိုကျတာမှနျလား ဆိုတာကိုပေါ့။
“ဘယျလောကျခတျေဆနျဆနျ ဘယျလောကျ ဗိုလျဆနျဆနျနှလုံးသားက ဗမာ ဗြ…… ဗမာလိုတှေးမှာပဲ ဗမာ့ လှတျလပျရေးကိုကွိုကျမှာပဲ။ ယောကျြားက ဘယျလောကျပဲ ဗွိတိသြှဝနျထမျးဖွဈဖွဈ ဗမာပွညျကိုခဈြမှာပဲ ။ အဲဒီအတှကျလှတျလိုကျတာ မှနျတယျလို့ သူသိတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ့နရောမှာ ကြှနျတျောတို့ဝငျစဉျးစားကွညျ့လိုကျ။ လှတျတာမှနျမှနျးသိရငျလှတျရဲမလား…လှတျလိုကျရငျ ငါ့ယောကျြားပွုတျသှားမလား……ငါတို့တိုကျကွီးကို လာပိတျသှားမလား… ငါ့တို့လငျမယားနှဈယောကျကိုဖမျးမလား… သူတှေးမှာပဲ။ သူမတှေးပဲမနဘေူး……အဲဒါတှေ တှေးပွီးတော့မှ… အဲဒါတှဖွေဈခငျြဖွဈ လုပျရဲတယျဆိုပွီး မာရီလှတော လုပျသှားတာ……အဲ့ဒါအမှနျကိုခဈြတာပဲ။ အဲဒါသူရဲကောငျးပဲ။ ကြှနျတျောတို့ကမာရီလှတောလိုမလုပျရဲလို့မလုပျခဲ့ရတာတှေ အမြားကွီး။ ဒါဆိုရငျမာရီလှတောဟာလညျးသူရဲကောငျးအမြိုးသမီးတဈယောကျပါလို့ဆိုခငျြပါတယျ။ ဒီလို သူရဲကောငျးမြိုးကို မသိကွသေးတဲ့ ပရိသတျကွီးအတှကျ မွနျမာ့လှတျလပျရေးသမိုငျးစာအုပျမြားမှ ပွနျလညျကိုးကားတငျပွလိုကျပါတယျ။
မသိသေးတဲ့ပရိသတျကွီးကိုလညျး ပွနျလညျမြှဝပေေးကွဖို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ....။
#Myanmar_Online_News #ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး #Moe_Hay_Ko #မာရီလှတော